Perez oo qarka u saaran in uu noqdo kii taariikhda ugu wacnaa – Gool FM
Perez oo qarka u saaran in uu noqdo kii taariikhda ugu wacnaa
(Madrid) 05 Juunyo 2017. Sanadihii 1995, Florentino Perez waxa uu noqday madaxweynaha Real Madrid haddana wuu ka gun gaaray dhammaan wixii uu ballan qaaday taas oo ahayd in uu taariikh la sameeyo Real Madrid kana dhigo kooxda ugu sarreysa kubadda cagta dunida.
Magaalada Cardiff waxaa ugu rumowday riyadiisii iyada oo ay Real Madrid qaaday koobkeedii 12-aad ee Champions League-ga xilli ay noqotay kooxda qura ee tartankaas difaacatay taariikhda.
Perez waligii ma qarin in uu dhiirigalin ka qaato madaxweynihii hore ee Real Madrid Santiago Bernabeu si uu u gaaro guulaha uu soo hooyey ninkaas loogu magacdaray garoonka kooxda.
Koobabka iyaga oo badan oo deg deg ah ayey u imanayaan hadda xilli ay banaanka garoonkana horumarro ka sameeneyso.
Perez Intii uu ku guda jiray labadii xilli ee kala duwanaa oo uu hogaamiyey kooxda waxa uuu uruursaday 19 billadod, laakiin kii ugu dambeeyey ayaa ah mid sooyaalka u galay, iyada oo ay kooxdu si taariikhi ah u difaacatay koobkeeda Europe.
Kahor kulankii kama dambeysta, Perez waxaa lagu arkayey Hotel-ka kooxda iyada oo ay ka muuqato farxad maadama ay kooxdiisu afar sano saddex fiinaal ku gaartay waxau uuna ka hadlay sida ay arintaasi u ahayd shaqo adag.
Habeenkii, waxa uu ahaa ninka dhulkan ayeynu saarannahay ugu farxadda badan maadama kooxda caasimadda loo caleemo saaray booqarada Europe mar kale.
Dabcan, koobkan wax badan ayuu uga dhigan yahay kooxaha, laakiin ma gaarsiisna inta uu u le’egyahay Real Madrid maadama uu yahay midka naadigaas ‘Qeexa’.
14kii sano ee uu madaxweynaha ahaa waxa ay dhashay afar La Liga, afar Champions League, laba Copa del Rey, laba koobka kooxaha aduunka, saddex UEFA Super Cup iyo kuwo kale.
31 koob ee uu ku guuleystay Santiago Bernabeu wali waa ku masaafo jira laakiin Perez ma leylin kooxda wax ku dhaw 35ta sano ee uu hogaanka hayey Bernabeu.
"Kulanti wacan Fergie time!" Benzema oo la kulmay Sir Alex Ferguson
Ronaldo Yare oo goolkiisii ugu horreeyay ka dhaliyay gegada Bernabeu